Thursday January 29, 2015 - 00:02:39 in Wararka by Web Admin
Murti baa leh: "Abaal raag rag baa leh" mid kalana waxay leedahay: "Ruuxii abaalgala waa loo gudaa" mid ka agdhaw ayaa tiraa: "Abaal qof galaa badan, qof gudaase yar" mid kale ayaa dhahda: "Abaal laawe waa Eebbe laa
Murti baa leh: "Abaal raag rag baa leh" mid kalana waxay leedahay: "Ruuxii abaalgala waa loo gudaa" mid ka agdhaw ayaa tiraa: "Abaal qof galaa badan, qof gudaase yar" mid kale ayaa dhahda: "Abaal laawe waa Eebbe laawe!" Mid kalana waxay leedahay: "Abaal ha tirsan, haddaan laguu tirin".
Haddaba, anoo iska billaabaya aniga Bashiira, oo ay igu dabajiraan in badan oo Soomaali ah, aan dhaho: "Mudane Erdoğan mahadsanid” kuna halqabsanaya gabaygii Abwaan Gabay Xaddi ku yiri:
Farriinta "Mudane Erdoğan mahadsanid” waxaan dirayaa anoo og inay jiraan kuwo dhibsanaya ama hoos ka gunuunacaya, maxaa yeelay, waxaa jira dad badan, oo wanaagga iyo hormarku u yihiin DHIMAAL iyo DHIBAAD.
Waxa loogu mahadcelinayo mudane Erdoğan maadaama la wada ogyahay, ma rabo inaan galo ama wax ka qoro, maxaa yeelay, inaan hore wax uga qoray ka sokow, haddana, waa: "War la qabaa xiiso ma leh!” iyo "Hadal badan haan ma buuxsho”.
Sidoo kale, marka mudane Erdoğan loo mahadcelinayo ama magaciisa kaliya la xusayo ma ahan mid isaga u gaar ah, ee waxaa la wadaaga dhammaan bulshada Turkida, oo aan la’aanteed Erdoğanna jireen madaxna noqdeen. Waana meesha laga yiraa: "Madax meel ka sarraysa oo la salaaxaa ma jirto” illeyn isagaa hoggaamiye u ehe.
"Waxba yaanu xaalkay i marine, Xoolana i siine
1- SUNTA GALBEEDKA: Kooxdani, waa koox cabsan afkaarta reer Galbeedka, oo aragtida ay ku dhaliilsan yihiin mudane Erdoğan iyo imaatinkiisa Soomaaliya sabab uga dhigaya, waxyaabo ka dhacaya meelo ka baxan Soomaaliya. Xoogga dooddoodu waa; mudane Erdoğan wuxuu faraha kula jiraa colaadda iyo dagaallada ka holcaya BARIGA DHEXE, oo waliba ku eedeynaya, in mudane Erdoğan si toos ah u taageero qolylaha qoorgoynta iyo qalalaasaha ee DAACISH (ISIS) haddaba, kuwan waxaan weydiin lahaa: idinka maxaa idin ka galay waxa ka dhacaya BARIGA DHEXE, oo aadnaan uga hadlayn waxa ka dhacaya BARIGA AFRIKA? Ta kale, ka warrama haddii la idin yiraa: qolylaha iyo qalalaasaha qoorgoynta ee DAACISH (ISIS) waxaaba loo abuuray sidii loogu burburin lahaa xoogga soo ifbaxaya ee Turkiga? Saw ma ogid haddii aad dhanka shishe xaajada ka joogsato, in dhan ka sii fog laga joogsan karo? Ta kale, anaga (Soomaali ahaan) maxaa naga galay ama nooga xiran waxa ka dhacaya BARIGA DHEXE iyo belaayadiisa? Wixii isku raacdaysanaya anagoo ka xun dhibka soo gaaraya marrasta iyo danyarta, haddana, waa: "Laba QAAWAN isma qaaddo” ee saw ma habboona in BARIGEENNA aan ku ekaanno, oo aad nooga sheekaysaan?.
Dadka sidan ku doodaya waxaa ka mida, kuwii hadda ka hor celiyey Markab deeq ah oo ay ku deeqday dawladda Turkigu, oo yiri; "nalagama tashan!” Oo haddii aad tii hore diidday, tan maxaad ka rabtaa, saw isku fillaasho ma muujin, maad ku socotid?.
Haddaba aan is weydiinno: Turkidu saddaxdan key yihiin? Ani ahaan kan hore, oo inta ay noo qabteen qolo, qaran iyo qarammo noo qabatay ma jirtaa? Warcelintu waa maya. Nin maanka looga jiro ayaa la weydiiyey: Waxqabadka Turkiga ka warran? Markaa ayuu yiri: "Lacagtii Eebbe Turki noo dhiibay waa na soo gaarsiiyeene, tii reer Galbeedka iyo Carabta ayaa la musuqmaasuqey!”.
"Marwo GOORYAAN ayaa ku haya!” say inta KAB la dhacday ku tiri:
"MUSHAARI ma qabto GOORYAANE, hadda lacagtaydii i siiya!” Haddaba, haddii laga xoroobay ama laga raystay kuwii Mushaarida lahaa GOORYAAN ayey qabtaa iyo socdaal dibadda ah ee Nayroobi iyo Dubaay la aadi lahaa, maxaa la rabaa? Anigu run ahaan ma garan, ee yaa garan kara? Ogoow, halkaa lacag ka badan KUN DOLLAR ayaa baaqanaysee, oo diyaaradda iyo socdaalka ehe.
"Alla ba’ayeey, inuu u KUFSADO ayuu rabaa!” haddi waa markii uu damcay inuu u asturo cawrada iyo jirka ka qaawan, iyada oo la iska wada daawanayey. Halkii ay eheed inay u mahadceliso, oo waliba baalka ka gasho ama iyaduba galiso, waa taa sumcaddii iyo uga ciyaartay magacii, oo ka dhigtay wiil gabdhaha fara xumeeya, oo aan lahayn dadnimo iyo damiir damqada!
Sidoo kale, waxaa jira, dad ku dooda, muxuu Turkigu hadda noogu soo gurmanayaa, oo uusan mar hore noogu soo gudbin saacidaadda, uu hadda na siinaa? Micnaha waa la soo daaheen camal. Oo kaalay, adigu maxaad u dhiibatay oo ay kaala soo daaheen? Soomaalida ayaa tiraa: "Jinni looma labeensho!” tani waxay i soo xasuusiday Maxamuud Axmad Nuur "Tarzan”, oo Dawladda Masar ku dhaliilay in Xasan Sheeq oo booqasho ku tagay ay deeq ahaan u siiyeen HAL MILYAN, oo yiri wax u dhigma; "In laga qaato ma ahayn!”.
12/09/2016 - 15:02:01
21/05/2016 - 01:39:11
15/08/2015 - 00:00:02
25/01/2015 - 18:19:53
(Madaxtooyada Somaliya) Madaxweyne Erdogan oo Muqdisho soo gaarey, mashaariicna furey
25/01/2015 - 17:17:09
Isbitaalka Digfeer oo Madaxweyne Erdogan loogu magac daray isla markaana xariga laga jaray (Sawiro)
25/01/2015 - 14:39:58
MUDANE, Xasan Shiikh : **Kaalinta Turkiga ee Soomaaliya: Taageerada Niyadsami leh ee Waqtiga Adag**‏
25/01/2015 - 14:38:48